Only Lovers Left Alive (2013) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 85% မြားတောငျ ရထားတဲ့drama/fantasy ဇာတျကားလေးပဲ ဖွဈပါတယျ. ..အဓိက သရုပျဆောငျကတော့ Marvel fan တှရေဲ့ အသညျးစှဲTom Hiddleston (Loki) ဖွဈပွီးမငျးသမီးကတော့ Tilda Swinton ဖွဈတာကွောငျ့ ဇာတျကားကောငျး တဈခုဖွဈမှာ ပွောနစေရာမလိုတော့ပါဘူးနျော…
မငျးသားနဲ့မငျးသမီးကို ကွညျ့ရတာ သာမနျလူတှနေဲ့ကှဲပွားနကွေတယျ….ပိုကျဆံတှအေမြားကွီးကိုငျထားနိုငျသလို စကားပွောရငျလညျးဟိုးနှဈပေါငျးမြားစှာက သဆေုံးတဲ့လူတှကေို မကျြနှာခငျြးဆိုငျခဲ့ရသလိုလို အသကျရာကြျောနရေတဲ့ပုံစံလိုလိုတှနေဲ့….ပွီးတော့ သူတို့တှဟော ဆေးရုံကနေ သှေးတှဝေယျယူနတောလညျးတှရေ့တယျ….
သူတို့ဟာ လူသားတှရေောဟုတျရဲ့လား….လူသားတှနေဲ့ရောနှောပွီး ဘာကွောငျ့ဒီလောကျကွာအောငျနနေိုငျတာလဲ….spoiler ဖွဈမယျစိုးလို့ ဒီလောကျပဲပွောပါရစေ…ခံစားကွညျ့ကွပါ
ဒီကားလေးကတော့ IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 85% များတောင် ရထားတဲ့drama/fantasy ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ..အဓိက သရုပ်ဆောင်ကတော့ Marvel fan တွေရဲ့ အသည်းစွဲTom Hiddleston (Loki) ဖြစ်ပြီးမင်းသမီးကတော့ Tilda Swinton ဖြစ်တာကြောင့် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်မှာ ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်…
မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကို ကြည့်ရတာ သာမန်လူတွေနဲ့ကွဲပြားနေကြတယ်….ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကိုင်ထားနိုင်သလို စကားပြောရင်လည်းဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာက သေဆုံးတဲ့လူတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ခဲ့ရသလိုလို အသက်ရာကျော်နေရတဲ့ပုံစံလိုလိုတွေနဲ့….ပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ ဆေးရုံကနေ သွေးတွေဝယ်ယူနေတာလည်းတွေ့ရတယ်….
သူတို့ဟာ လူသားတွေရောဟုတ်ရဲ့လား….လူသားတွေနဲ့ရောနှောပြီး ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာအောင်နေနိုင်တာလဲ….spoiler ဖြစ်မယ်စိုးလို့ ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေ…ခံစားကြည့်ကြပါ
Tale of the Nine Tailed (Season 1) အပိုငျး (၁၅)